အိမ်၊ခြံ၊မြေဝန်ဆောင်မှုဥပဒေမူကြမ်းကို ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် လွှတ်တော်သို့ပေးပို့မည် ၊ ၂ဝ၁?? - Yangon Media Group
အိမ်၊ခြံ၊မြေဝန်ဆောင်မှုဥပဒေမူကြမ်းကို ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် လွှတ်တော်သို့ပေးပို့မည် ၊ ၂ဝ၁??
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ – မြန်မာ့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ပြန်လည်လှုပ် ရှားစေနိုင်မည့် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေဝန် ဆောင်မှုဥပဒေမူကြမ်းကို ယခုနှစ် ကုန်ပိုင်းတွင် လွှတ်တော်သို့ပေးပို့ ကာ လာမည့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြ ဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေဝန်ဆောင် မှုဥပဒေမူကြမ်းအတွက် ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်ဥပဒေရေးရာနှင့် အ ထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသူရ ဦးရွှေမန်းသည် အိမ်ခြံမြေအသင်း အဖွဲ့များနှင့် ယခုလပထမပတ်အ တွင်း တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေဝန် ဆောင်မှုအသင်း(ဗဟို)၏ အထွေ ထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါ်မို့မို့ အောင်က”ဒီဥပဒေမူကြမ်းကို ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်က သြဂုတ် ၃ဝ ရက်မှာ တင် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေမူကြမ်း တင်ပြီး ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၈ ရက်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ် များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ကနေ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ ပါတယ်။ နောက် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် စက်တင် ဘာ ၂၅၊ ၂၆ ရက်နေ့က ဒုတိယအ ကြိမ်ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး အခုကတတိ ယ အကြိမ်တွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါတယ်။ အဘသူရဦးရွှေမန်းရဲ့အဖွဲ့တွေ လည်းပါတယ်။ ရှေ့နေချုပ်ရုံးက ရှေ့ နေတွေလည်းပါတယ်။ အန်တီတို့ အသင်းနဲ့ တခြားအသင်းအဖွဲ့တွေ လည်းပါတယ်။ တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ အကြံဥာဏ်တွေပေးတယ်။ လိုချင် တဲ့အချက်အလက်တွေထည့်တယ်။ ဒီဥပဒေက ရှိသင့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ် တယ်။ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုတွေလာဖို့ရော၊ နိုင်ငံတော်အတွက် အခွန်တွေရရှိဖို့ရောအခု လက်ရှိ မှာ အိမ်ခြံမြေတွေအေးနေတာတွေ ကလည်း တစ်ခုပါဝင်တယ်။ အား လုံးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးပါပြီ။ လွှတ် တော်ကိုပို့ဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ လွှတ် တော်ကို မကြာခင်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်း လောက်မှာ ပို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဥပဒေ ကတော့ လာမယ့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မှာ လွှတ်တော်တွေက အတည်ပြုပြီး ပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့် ထားပါတယ်”ဟု နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက် က ပြောသည်။
ယင်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်း ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေဈေး ကွက်အတွင်းရောင်း၊ဝယ်မှုများမှာ ပိုမိုစနစ်ကျမည်ဖြစ်ပြီး အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ များသည် လိုင်စင်ဖြင့်လုပ်ကိုင်လာ ရမည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ဈေးကွက်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသော ရောင်းမှား၊ ဝယ်မှားကိစ္စရပ်များ၊ နှင့် ကမောက်ကမဖြစ်နေသည့် ဈေး နှုန်းများကို ထိန်းချုပ်လာနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်မို့မို့အောင်က”ဥပဒေ ထွက်ပေါ်လာရင်အကျိုးဆောင် ကို လူတိုင်းလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ အ ကျိုးဆောင်တွေက professional ဖြစ်ဖို့လိုမယ်။ ဝန်ဆောင်ခရတာ နဲ့အညီ ဝန်ဆောင်မှုပြန်ပေးတာ လည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဖြစ်ရ မယ်။ ဒါကြောင့် ဥပဒေပေါ်ထွက် လာရင် အကျိုးဆောင်တွေအတွက် လိုင်စင်ထုတ်ပေးမယ့် ကော်မတီ တစ်ရပ်ပေါ်လာမယ်။ ဒီကော်မတီ ကထုတ်ပေးမယ့် လိုင်စင်ကအဆင့် အလိုက်ကွဲသွားမယ်။ ဒီပလိုမာ တက်တဲ့လူတွေက လိုင်စင်တစ်မျိုး၊ တချို့ကျတော့ စာမေးပွဲဖြေစရာမ လိုဘဲ ကော်မတီကဖွင့်တဲ့သင်တန်း တက်ပြီး ရတဲ့လိုင်စင်ကတစ်မျိုးနဲ့ ရရှိကြမယ့် လိုင်စင်ကတူမှာမဟုတ် ဘူး။ အဲဒီလိုတော့ ကွာခြားသွား မယ်။ လိုင်စင်ရှိတဲ့လူကစနစ်တကျ နဲ့ အလုပ်လုပ်မယ်။ အိမ်ရှင်ကိုဆုံး ခန်းတိုင်အောင် လုပ်ပေးမယ်။ အိမ် ရှင်ကလည်း ထိုက်သင့်တဲ့ အကျိုး ဆောင်ခပေးမယ်။ ဒါမျိုးတွေက ဖြစ်သင့်တယ်။ မဟုတ်ရင်လက်ညှိုး ထိုးရာပြတဲ့အကျိုးဆောင်တွေ ဘယ် ရှာရမှန်းမသိတဲ့အကျိုးဆောင်တွေ နဲ့ အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင် ခက်တယ်။ နိုင်ငံတော်ကဒီလိုပံ့ပိုးပေးရင် နိုင်ငံ တော်ကိုလည်း အကျိုးဆောင်လုပ် တဲ့လူတွေက အခွန်ဆောင်ဖို့အ တွက် ဝန်လေးမှာမဟုတ်ဘူး။ အခွန် ဆောင်ကြမှာပဲ။ စည်းစနစ်ရှိတဲ့ အိမ် ခြံမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်တဲ့ လူတွေ ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်”ဟု ပြောသည်။
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေဝန်ဆောင်မှု ဥပဒေတွင် ပြည်တွင်းနိုင်ငံသားဝန် ဆောင်မှုအကျိုးဆောင်များ၊ ဝယ် ယူသူ၊ ရောင်းချသူများအတွက်သာမ က ပြည်ပမှလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမည့် နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ပါ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများထည့်သွင်းရေး ဆွဲထားကြောင်း သိရသည်။
လိပ်ကျွန်းအမှု နောက်ဆုံးအဆင့် အယူခံ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက် စတင်ကြားနာမည်
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို လွတ်လပ်သော တတိယ အဖွဲ့အစည်းဖြင့် စိစစ်နေသော်လည်း စနစ်ကျမှု အား??
နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာခွဲဝေမှု ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်သဖြင့် ပြောင်းလဲရန် မသင့်ဟုြ
အင်တာနက် အသုံးပြု ကျူးလွန်ပြစ်မှုများ ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ရန် ဆိုက်ဘာ ဥပဒေ အကြမ်းထည် ပြီး?
စီရော်နယ်ဒို မရှိပါက မိမိအသင်းပြောင်းမည်ဟု မာဆယ်လို ပြောဆို